Public Kura | » गर्भ राख्ने औषधि सेवन गर्दा एकैचोटी जन्मिए ७ बच्चा ! गर्भ राख्ने औषधि सेवन गर्दा एकैचोटी जन्मिए ७ बच्चा ! – Public Kura
‘गर्भ रहेपछि नै हामीलाई थाहा थियो कि एक भन्दा धेरै बच्चा गर्भमा छन् । पत्नीले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएसँगै हामीले उपचार गराइरहेको निजी क्लिनिकले हामीलाई अस्पताल जाने सल्लाह थियो ।’
त्यसैले अस्पतालका डाक्टरहरुले तत्कालै छलफल गरेर उनको शल्यक्रियाको तयारी गरे । शल्यक्रिया एक घण्टासम्म चल्यो । शल्यक्रिया समेत निकै जटिल र खतरनाक बन्यो । किनकी उनको पेट, गर्भाशय र पिसाब थैली एक आपसमा टाँसिएका थिए । निकै सावधानी पूर्वक गर्भाशयबाट उनीहरुले एक एक गरी सातवटा बच्चा बाहिर निकाल्न सफल भए डाक्टरहरु ।
डाक्टरहरुका अनुसार गर्भाधारण गर्नका लागि औषधिको सेवन गर्नाले यसरी ठूलो संख्यामा एकसाथ गर्भ रहने गर्दछ । औषधिका कारण एकसाथ एकभन्दा धेरै डिम्बहरु पाक्ने हुनाले जुम्ल्याहा वा त्यो भन्दा धेरै संख्यामा बच्चाको भ्रूण बन्ने गर्दछ । ती महिलाले पनि गर्भाधारण गर्ने औषधि सेवन गरेकै कारणले गर्भमा सातवटा बच्चा रहेको हुनसक्ने ठहर डाकटरहरुले गरेका छन् ।